Awekho amabala angaboni anezici zikaMose - amaGeofumadas
Azisekho izindawo eziyimpumputhe ezinemisebenzi kaMose
Septhemba, 2019 Geospatial - GIS, Innovations
Ngaphandle kokungabaza, icala elihle kakhulu lapho usebenza nezithombe ze-satellite ukuthola izithombe ezifanele kakhulu zecala lokusebenzisa, yithi, i-Sentinel-2 noma i-Landsat-8, emboza ngokuthembekile indawo oyithandayo (AOI); Ngakho-ke, kuvumela ukuthola idatha enembile futhi ebalulekile njengomphumela wokucutshungulwa.
Ngesinye isikhathi, ezinye izingxenye ze-AOI yakho, ikakhulukazi kuma-AOI amakhulu amboza izigcawu eziningana, kanye nama-AOIs aseduze noma emaphethelweni ezigcawu, angahlala ngaphezu kwemingcele yendawo yamanje. Lezi zinkinga zokujoyina izithombe zokuhlanganiswa zingaholela ekuhlaziyweni okuyingxenye nasekulahlekelweni kwemininingwane ebalulekile.
Mosaic wazalwa ukuxazulula izinkinga zokuhlangana kwezithombe
UMose waklanywa kusuka ekuqaleni njengokulula ukusebenzisa umsebenzi okuvumela ukuthi uhlangane, uhlanganise futhi ubone ngeso lengqondo izigcawu ezihlukaniswe ngenzwa, ziye esithombeni, nge-AOI ethile nesikhathi esibekiwe sedatha.
Zonke izigcawu ezitholakalayo zosuku oludingekayo zihlanganisiwe kanti i-AOI isembozwe nge100%.
Isixazululo silula futhi sisebenza kahle kangangokuba kuyamangaza ngokumangazayo ukuthi akukaze kwenziwe ngaphambili.
Izisekelo zikaMose ezitholakala kumathuluzi we-GIS
Kukhona izindlela ezahlukahlukene Ukuze wakhe owakho uMosey, ungokhetha masisha afanele izidingo zakho.
Ukusabalala komhlaba wonke kukaMose
UMosex uhlanganiswe kuwo wonke ama-satellite wedlula ngosuku.
UMose wenziwe ngokuqinile ngaphakathi kwendawo esungulwe yenzalo (AOI).
Umsebenzi kaMose usebenza kanjani kuLandViewer?
I-LandViewer (LV), futhi, inikezela ngenhlanganisela yezindlela, okungukuthi, umsebenzisi udonsa i-AOI. Ngemuva kwalokho uhlelo lusonga i-AOI ebhokisini i-geometry ethize echazwe nge-AOI, ngokuya ngezithombe ezizonikezwa. Isibonelo, esimweni lapho i-AOI iyisiyingi, i-mosaic izomelwa ngaphakathi kwesikwele esiveziwe.
Ngokuya ngendlela i-AOI esungulwe ngayo, umsebenzisi uzothola omunye wale miphumela elandelayo:
Uma ulahla umaki ebalazweni, isoftware izokhiqiza uhlu lwezindawo ngazinye, njengoba wawenza ngaphambili.
Uma udweba i-AOI enkulu noma i-AOI etholakala emaphethelweni wezigcawu ezimbili noma ngaphezulu, uMosaic uzoqedwa emiphumeleni yokucinga
Isimo ukuphela kwokwethula uMosaic yi-AOI
Lapho usudonsele i-AOI ukumboza izigcawu eziningana, yahlunga ukushuba kwesibhakabhaka futhi setha i-angle efiselekayo yelanga, uhlelo lukhombisa imiphumela yokucinga kaMose ngokubuka kuqala okwenziwe ngokuya ngamapharamitha asethelwe ngokuzenzakalelayo. Inani lezigcawu ezikuMoses lichazwe kumakhadi wokubuka kuqala.
Amandla amakhulu kaMose
Sesifinyelele iphuzu elibaluleke kakhulu. Yini enye esingayenza ngoMose? Uma sesibonile uMose ebalazweni, singakwazi ukuqhubeka nalezi zinketho ezilandelayo:
Faka izinkomba nezinhlanganisela zamaqembu, okuzenzakalelayo kanye nokwezifiso.
Setha ukugqama kanye nokwelula okuhlukile.
Ukuhlaziywa kwesiphequluli (kuyeza maduze)
Gada futhi ulinganise ukuthi izimfanelo zendawo ethile zishintshe kanjani phakathi kwezikhathi ezimbili noma ngaphezulu zesikhathi nomsebenzi we-Change Detection.
Yenza ukuphathwa kwezoni okusebenzayo ngokuya ngamanani wamanani enkomba, isebenzisa umsebenzi we Ukuhlangana.
Qinisekisa amandla wokukhula kwezimila endaweni yakho oyithandayo (AOI) isikhathi eside ngezinketho ze-Time Series
Dala i-GIF ekhangayo noma izindaba zevidiyo bese wabelana ngemininingwane yakho nabanye abasebenzisi abaku-inthanethi ngezithombe Isikhathi seqile.
Landa izinketho ezitholakala ku-LandViewer
Izinhlobo ezintathu zokulanda zingasetshenziswa kuMoses, lezi zibonwa, i-Analytics noma i-Index, ngokuya ngezidingo zomsebenzisi.
Qaphela: umsebenzisi ukhetha uhlobo lokulanda «lukaMose» noma «Izingcezu ngobuningi bawo». Umehluko phakathi kwalezi zinketho ezimbili ulele kudatha yokugcina ezokwethulwa kumsebenzisi: uhlelo lulanda izigcawu ezihlanganisiwe ngenketho yokulanda "kaMose"; Uhlelo lulanda izingcezwana zezigcawu njengohlu uma kukhethwe ipharamitha «Izingcezu eziningi».
Kubonakala: uma ukhetha uhlobo Visual, imininingwane edalulwayo izolethwa ngefomethi yefayela le-JPEG, KMZ ne-GeoTIFF equkethe izigcawu ezihlanganisiwe (ngokwesibonelo, zonke izigcawu eziwela ku-AOI futhi zingaweli).
Ama-Analytics: umphumela wokulanda nge Ama-Analytics okhethiwe kuzoba ifayela lama-band ahlanganisiwe, ngaphandle kwe-metadata (ngokwesibonelo [GeoTiff1: B02, GeoTiff2: B03, GeoTiff3: B04, GeoTiff4: B05.]).
Ngohlobo lwe Inkomba, idatha evelayo ye-mosaic izokwethulwa njengefayela le-TIFF
Inkomba: Qaphela inketho "Yokulanda ngesitshalo". Ukunqunywa kocwecwe kwenziwa ngokuya ngamapharamitha womsebenzisi, okuwukuthi, iJometri yebhokisi echazwe ngumsebenzisi. Ezimweni lapho ukunqunywa kwamapharamitha kungahleliwe, zonke izigcawu zilandiwe ngokuphelele.
Sebenzisa i-Case 1: Ukuqapha Ukuthuthukiswa Kwezokwakha, eDubai.
Injongo: bona inqubekela phambili ekwakhiweni kwendawo enkulu yenzalo (AOI)
Izithameli eziqondiwe: zonke izinkampani embonini yezokwakha
Inkinga: Umsebenzisi usethe noma ulayishe indawo enentshisekelo bese ukhetha isithombe esithathwe ngoJulayi 19 kusuka ku-2019. Isithonjana sikhombisa ngokusobala ukuthi isithombe ngasinye asimbozi yonke indawo oyithandayo.
Isixazululo: Kulokhu, umsebenzisi kufanele akhethe ikhadi lokubuka kuqala elinenombolo efanelekile yezigcawu ezimboza ngokuphelele i-AOI yakhe, yemiphumela yosesho eyenziwe, bese uchofoza u- "Mose".
Isiphetho: UMose uvumela ukuqashwa kwezindawo ezinkulu.
Phambilini, ukubheka izindawo ezinkulu bekudinga umsebenzisi ukuthi ashintshe phakathi kwezigcawu futhi azihlanganise ngesandla. Le nqubo yayingathandeki neze futhi yathatha isikhathi eside. Kusukela manje kuqhubeke, yonke into iyashesha futhi ilula: lungiselela i-AOI yakho ne-LandViewer izokuphatha ngokuzenzakalelayo konke okusele.
Icala lokusebenzisa le-2: Ukuqapha umlilo waseCalifornia
Injongo: Chaza indawo elimele, okungukuthi, faka inkomba ye-NBR bese ulanda indawo kaMose.
Incazelo: NgoNovemba we2018, kwaqubuka umlilo omkhulu eCalifornia, kwashona okungenani abantu be-85. Cishe izindlu eziyizinkulungwane eziyishumi nane (14,000) zacekelwa phansi, kwathi cishe amahektha ayikhulu ayishumi nanhlanu (115,000) amahlathi alahlekile. Iziphathimandla zendawo zazibiza ngomlilo omkhulu kunayo yonke emlandweni wombuso. Lokhu kuphawula akumangalisi, yize iqiniso lokuthi amahektha angaphezu kwenkulungwane (100,000) nawo elahlekile ngonyaka owedlule.
Iziphathimandla zaseCalifornia zathumela abacishi bomlilo abacishe babe yizinkulungwane ezinhlanu ukuze bacime lo mlilo, abakwazanga ukuhambisana nomlilo, owathi kwezinye izindawo wasakaza ngejubane lamakhilomitha we-130 ngehora.
Isixazululo: Ukuthola umonakalo ezifundeni ezithintekile, kubalulekile ukuqhathanisa i-mosaic yangaphambi nangemva kwenhlekelele nenkomba esetshenzisiwe ye-NBR.
Isinyathelo se-1: dweba noma ulayishe i-AOI endaweni yangakini oyithandayo bese usetha usuku langaphambi kwenhlekelele.
Izithombe ngaphambi kwenhlekelele ye-1Umphumela wokumelela i-mosaic ekubolekeni okuphelele kwendawo yenzalo (AOI).
I-Paso 2: Khetha ikhadi lokubuka kuqala nge-Mosaic, iya kuthebhu ethi "Inhlanganisela yeBhendi", bese ukhetha inkomba ye-NDR. Kulesi sinyathelo, uhlelo libonisa amanani entengo abaliwe, aqokonyiswe ku-orange-green. Bese uqhubeka ngethebhu ethi "Landa" bese ukhetha indawo lapho udinga khona idatha efanelekile.
Izithombe ze-2: indawo enenkomba ye-NBR ikhombisa isimo ngesikhathi somlilo.
Isinyathelo se-3: Khetha isithombe sangemva kwenhlekelele yendawo efanayo oyithandayo (AOI).
Izithombe ngaphambi kwenhlekelele ye-3: umphumela wokumelela kaMose kuyo yonke indawo yenzalo (AOI).
Isinyathelo se-4: Zuza imiphumela yokulayishwa kaMoses usebenzisa inkomba ye-NBR, ulandela ama-algorithms afanayo atholakala esinyakazweni 3.
Izithombe zemiphumela ye-4: indawo yangemva kwenhlekelele ikhombisa indawo ethintekile futhi ibona ngomonakalo.
Umphumela: Izindawo ezithintekile zikhonjiswa zibomvu. Ngokuqhathanisa izithombe ngaphambi nangemva kwenhlekelele ngamanani we-NBR index, singakwazi ukuhlola umonakalo.
Vumela uMose akwenzele umsebenzi
Ekuphetheni, uMose unikeza isixazululo esiyingqayizivele sokuthola isithombe esimboza ngokuphelele indawo oyithandayo, noma ngabe singengakanani, sibe nemiphumela emihle kakhulu. UMose uvumela inhlanganisela yezithombe zansuku zonke ze-satellite ezitholwe kunzwa yendawo emisiwe, izinkomba ezinqunywe ngaphambilini noma ezenziwe ngezifiso kuflaya, kanye nokuthi kungenzeka ukulanda izigcawu ukuze kuhlaziywe kamuva. Yithi ubingelele ekuqedeni okwenziwa ngesandla, ukuguqulwa kwesithombe, izikhala ezingenalutho nokujoyina isithombe sombhalo, kuze kube phakade.
Ukuthola imininingwane eningiliziwe ngeMosi, bheka umhlahlandlela womsebenzisi weLandViewer noma usithumele i-imeyili ku-support@eos.com
Thumela Previous«Langaphambilini I-STAAD - idala iphakethe lokuklama elingabizi kakhulu elilungiselelwe ukumelana nengcindezi yesakhiwo - eNtshonalanga India
Post Next Ukuchazwa kabusha kwe-Geo-Engineering ConceptOkulandelayo »
Impendulo eyodwa kokuthi "Azisekho izindawo ezingaboni kanye nezici zikaMose"
I-GIS Infomedia uthi:
Novemba, i-2019 ku
Hhawu, angikaze ngazi lokho. ngiyabonga kakhulu